Global Voices teny Malagasy » Tontolon’ny bilaogy Saodiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Tontolon'ny bilaogy Saodiana
Voadika ny 10 Novambra 2018 8:35 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Al-Omran Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Mediam-bahoaka
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny taona 2006)
Tratry ny Ramadana ny rehetra. Tongasoa eto amin'ity fitsidihana ny tontolon'ny bilaogy Saodiana ity. Ny fanakanana ny Blogger.com no vaovao lehibe ato amin'ny tontolon'ny blaogy Saodiana tamin'ity herinandro ity.
Rehefa nahita izy fa nosakanana ny Blogger, dia nanomboka nameno ny taratasy fanokafana avy hatrany i Noura, na izany aza, nihevitra izy fa tsy hanokatra izany ny ISU . “Nanandrana azy ireo imbetsaka aho taloha ary fantatro ny paikadin'izy ireo. Isaky ny mahita tranonkala manintona ny sain'ny fiarahamonina Saodiana izy ireo, dia sakanan'izy ireo izany,” hoy izy nanoratra. Nantsoin'i  Mashi Sah hoe “tantara ratsy” ny zava-nitranga, ary i Riyadhawi niantso hoe KACST  “tanànan'ny haizina “.
Dotsson, vaovao ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana, nanao fitetezana mba hanasongadina ny fihetsik'ireo bilaogera maromaro mikasika ny fanakatonana, nampiasa ny endrika fanesoana mampiavaka azy izy.
Roba indray nandefa lahatsoratra momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy . “Misy ny ady mihatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy eto amin'izao tontolo izao!” hoy izy. Ny iray amin'ireo ohatra napetrany dia ny raharaha Rania Al-Baz . Ary raha milaza i June fa manohana an'i Rania izy , na dia tsy fantany aza hoe nahoana, Nour kosa manohitra, ary mihevitra fa “eo ampanatontosana ny dimy minitra mampalaza azy i Rania.”
Abduh miresaka momba ny tombontsoa amin'ny fampiasana boky elektronika  amin'ny fanabeazana. Farooha namoaka sary sasany avy amin'ny tanànan'i Riyadh . “Riyadh endriny tsy misy fanamboamboarana sy mahery setra, Riyadh araka ny maha-izy azy,” hoy izy. Deema mitantara amintsika momba ny fihaonany voalohany tamin'ny vadin'ny rahalahiny , izay nahagaga azy fa Japoney. Nzingha manana lahatsoratra lava mahafinaritra momba ny fiainana iombonana ao Arabia Saodita . Maka fotoana ihany koa izy mba hampianarana antsika fomba nahandro sasany  amin'ny Ramadhan. Leo an'ireo rehetra voalaza etsy ambony? Azonao atao ny manandrana ny teknikan'i Mochness mba hialàna amin'ny fahaleoleovana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/10/129147/
 nihevitra izy fa tsy hanokatra izany ny ISU: http://se3loah.blogspot.com/2005/10/blog-post_07.html
 niantso hoe KACST: http://www.kacst.edu.sa/
 tanànan'ny haizina: http://riyadhawi.blogspot.com/2005/10/blog-post.html
 hanasongadina ny fihetsik'ireo : http://dotsson.blogspot.com/2005/10/united-we-stand-divided-we-fall.html
 herisetra atao amin'ny vehivavy: http://youmeyatduba.blogspot.com/2005/10/i-cant-take-it-any-more.html
 raharaha Rania Al-Baz: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&amp;amp;amp;amp;article=71327&d=8&m=10&y=2005&pix=kingdom.jpg&category=Kingdom
 manohana an'i Rania izy: http://gemini-blues.blogspot.com/2005/10/read-this.html
 Nour kosa manohitra, : http://harjaty.blogspot.com/2005/10/rania-al-baz-threat-to-our-society.html
 tombontsoa amin'ny fampiasana boky elektronika: http://www.abduh.net/index.php?p=144
 sary sasany avy amin'ny tanànan'i Riyadh: http://farahssowaleef.blogspot.com/2005/10/specters-of-abandoned-riyadhian-alleys.html
 fihaonany voalohany tamin'ny vadin'ny rahalahiny: http://dreamydeee.blogspot.com/2005/10/lost-in-translation.html
 fiainana iombonana ao Arabia Saodita: http://nzinghas.blogspot.com/2005/10/compound-living.html
 fomba nahandro sasany: http://nzinghas.blogspot.com/2005/10/ramadhan-cooking.html
 teknikan'i Mochness mba hialàna amin'ny fahaleoleovana: http://rojo.com/r/183480148/mochness.blogspot.com/2005/10/boredom.html